Pubs & Archive Nightlife - IntoKildare
Fantaro i Kildare's
Hatramin'ny afo misokatra mahafinaritra sy ny fivarotana varotra mivantana, hatramin'ny gastropub sy bara fanaovana fanatanjahantena dia ho hitanao ao amin'ny trano fisotroana kafe mahafinaritra rehetra ao Kildare izany.
Tia ny fientanam-po amin'ny sehatry ny pub Irlandy? Misy safidy maro manerana ny County Kildare ho anao hivoahana amin'ny tanàna na hiaina fiainana eo an-toerana.
Rehefa mankafy ny zava-pisotro ankafizinao ianao, dia hahita safidy maro tsy manam-petra. Ho an'ireo fanatisma labiera, tsy ho diso fanantenana ianao amin'ny sehatry ny labiera mavitrika handraisana ohatra sy ho an'ireo tia cocktail, bara sy trano fisakafoanana maro no manana mixologists voaofana manokana. Na angamba aleonao miala sasatra eo alohan'ny afo misokatra ao amin'ny trano fisotroana nentim-paharazana misy vera misy mainty, isika no tranon'i Arthur!
Pub Irlandey taloha mahazatra misy entana antitra am-polony ary bric-a-brac hafa miaraka amina fotoam-pivavahana nentim-paharazana.
Any Clane, The Village Inn dia orinasam-pianakaviana eo an-toerana izay manana kalitao avo sy serivisy lehibe.